Tag: imewe ngwa ngwa | Martech Zone
Kpido: ngwa ngwa mkpanaka
Sunday, Jenụwarị 27, 2013 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Emepụtara App Press ka ọ jikọtara ọdịiche dị n'etiti ndị na-ese ihe nkiri na ndị mmepe. Dịka onye mmebe, onye guzobere Grant Glas chọrọ iwu koodu ngwa n'efu. Dịka onye nrụpụta, Kevin Smith dere azịza ya. Ha mepụtara ngwa 32 na-eji ụdị ngwa mbụ nke App Press yana kemgbe ịmalite, ndị ọrụ 3,000+ kere ngwa na ikpo okwu ha. Emepụtara App Press ka ọ dị ka Photoshop ma rụọ ọrụ dịka Isi Okwu. Nke a na-eme ka onye ọ bụla na-ese ihe nwee ike ima elu
Ingmepụta Ngwa Mobile Dị Mma
Thursday, January 3, 2013 Thursday, January 3, 2013 Douglas Karr
Na ngosi redio anyị na-esote anyị ga-atụle ngwa ngwa Starbucks Mobile nke weghaara 2012 Mobile Marketer of the Year Award. N'uche m, ọ bụ nnukwu ngwa mkpanaka nke jikọtara ọdịiche ahịa n'etiti ịzụ ahịa n'ịntanetị na ụlọ ahịa. Atụmatụ ndị na-eme ka ngwa ahụ nwee ihe ịga nke ọma iji rụọ ọrụ - ngwa a nwere ogwe igodo izizi n'ofe yana yana ihuenyo ụlọ nke gosipụtara akụkụ nke ngwa ahụ dabere